पत्नी तुलसाले नै गर्न थालिन् यस्तो काम धमाधम, अब के गर्लान् वामदेव गौतम ? – GALAXY
पत्नी तुलसाले नै गर्न थालिन् यस्तो काम धमाधम, अब के गर्लान् वामदेव गौतम ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर हिँडेका नेता वामदेव गौतमकी पत्नी तुलसा थापा गौतम भने एमालेकै बैठकमा सहभागी भएकी छन् । यता न उताको अवस्थामा रहेका वामदेवलाई आफ्नै पत्नीको सक्रियताले तनाव भएको हो ।
एमालेबाट समानुपातिक सांसद तथा अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेकी गौतम बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित महिला संघको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत सहभागी छन् ।
वामदेव गौतमले एमाले छाडे पनि उनले आफू अहिलेसम्म एमालेमै रहेको बताएकी छन् । उनले भदौ ९ गते अन्तिम समयमा नेकपा एस रोज्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए पनि समय सकिएको भन्दै सनाखत गरिएको थिएन । सोमप्रसाद पाण्डेलगायत केही सांसदले ‘नेकपा एस रोज्न पाउँ’ भन्दै अदालतमा निवेदन दिए पनि तुलसा थापा गौतम भने अदालत गएकी छैनन् ।
केही समययता पार्टी गतिविधिमा नदेखिएकी उनी अखिल नेपाल महिला संघको बैठकमा सहभागी भएकी हुन् । स्रोतका अनुसार वामदेव गौतमको परिवारमा पत्नी तुलसा र छोरा हरिश एमालेमै रहनुपर्ने पक्षमा छन् । हरिशलाई एमालेका केही नेताले पार्टीमै रहन र अर्को पाँच वर्षपछिको चुनावमा बर्दियाबाट उम्मेदवार बन्ने गरी तयारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै यता सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ । गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभामा युवराज खतिवडाको पदावधि सकिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एक वर्षअघि १ असोजमा नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेकी थिइन् ।
लगत्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत जिकिर गर्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उसो त वामदेव गौतम राष्टियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग उठाउदैं आएका छन् ।